के तपाईको आँखाको वरिपरी चाउरीपना देखिन थालेको छ? अपनाउनुहोस् यी अत्यन्त प्रभावकारी उपाय -
बढ्दो उमेरको साथ-साथै आँखाको वरिपरी त्वचामा चाउरीपना पर्न थाल्छ र कतिपय मानिसलाई कम उमेरमै यस्तो समस्या देखिन शुरु हुन्छ । अनुहारमा कसिलोपन कम हुनु कोलोजनको कमीको कारण हुन्छ, जसको कारणले चाउरीपना पर्न थाल्छ । यदि तपाईको जीवनशैली राम्रो छैन या आहार पौष्टिक छैन भने यो समस्या आउन सक्छ । तर यस्ता कयौँ घरेलू उपाय छन्, जसको मद्दतले आँखाको वरिपरीको चाउरीपना कम गर्न सकिन्छ । यसको साथै सही समयमा र उचित मात्रामा फलफूल, हरियो सागसब्जी, माछा र अन्य बढ्दो उमेरको समस्यालाई रोक्ने चीज, प्रोटीन र मिनरल्सयुक्त आहार खानुहोस् ।
रुखो त्वचामा प्रायजसो चाउरी पर्न थाल्छ । यदि सुख्खा त्वचालाई समय-समयमा स्क्रब गरी हटाउन नसकेमा त्यो त्वचामा जम्न थाल्छ । बजारमा उपलब्ध उत्पादनको साटो एक्सफोलिएट गर्नको लागि घरेलू वा प्राकृतिक तरिका उचित हुन्छ ।
Previous अचम्मकाे जीव जसले सजिलै संग पुर्नजन्म लिन सक्छ
Next विवादमा पर्यो टिकाथलीमा भुत आतंकको कुरा !यस्तो छ नालीबेली ! (भिडियो सहित)